24 Wanaagsan Dhamaan Qodobada Tattoos Fikirka Naqshadda Ragga - Fikradaha Fikradaha Faataxada
24 Midka ugu Fiican ee Loogu Talagalay Fikradda Naqshadeynta Dumarka
Haddii aad tahay nin, tani waa adiga. Tartanka shaashadda ee mid ka mid ah midabada ugu fiican ee aad abid arki karto. Xaqiiqdiina waad nagu raaci doontaan dhamaadka mawduuca.
1. Tattoo shaashadda
2. Cute shaatiinka shimbiraha ah
Waxaa jira xoogaa muhiim ah oo aad u baahan tahay inaad qaadato ka hor intaadan weydiisanin #half #sleeve tattoo sidaan oo kale. Marka hore waa xirfad of tattooist iyo labaad waa meeleynta tattoo aad adiga.
3. Tilmaamo yar oo qurux badan
Waxa aanad fahmin waa inaad haysatid gacmo furan #tattoo waxaa kaliya oo la heli karaa markaad awood u leedahay in aad qaabeysid qaabeyntaada.
4. Tartanka shimbiraha ee shimbir
Haddii ay dhacdo in aad ka cabsaneyso sida aad u heli lahayd garabkaaga tattoo shaashadda, waa inaad marka hore la tashataa tattooistahaaga kaa caawin kara inaad samayso doorashada saxda ah.
5. Tilmaamo yar oo qabow ah
Tilmaamo yar oo qabow ah ayaa waxay noqdeen waxa ugu badan ee haweenku aaney sameyn karin iyaga oo aan rabin in ay noqdaan kuwo xariif ah.
6. Jacaylka shaatiinka shimbiraha ah
Marka ugu horeysa ee aad doorato jacaylkaaga jilicsan ee shaashadda, dad badan ayaa la yaabi lahaa sida aad u soo aragtay naqshadeynta. A # qorshe sidan oo kale waxay noqotay waxa ragga ugu badan.
7. Midab leh shaatiinka shimbiraha ah
Maqnaanshaha waa haddii aad ku aragtay sida loo fariisto markaad haysato tattoo midab leh. Si kastaba ha noqotee, waa inaadan ka walwalin waqtiga aad kharashka bixiso sababtoo ah dhammaadka waxay cadeyneysaa macnaha.
8. Weyn shaatiinka shimbiraha ah
Haddii aad taatuwan tahay badh aad u weyn, ha ka welwelin wax badan sababtoo ah nooca dareenka ah ee aad heli lahayd. Naqshadu waa mid cajiib leh.
9. shaatiinka shimbiraha ah
Qofna ma arko naqshaddan mana doonaynin inuu qabto. Naqshaduhu waa qabow oo faahfaahinta waxaa loo habeeyey si qofkasta oo ka fekeraya wax gaar ah oo gaar ah wuxuu aadi karaa naqshadeynta tattoo.
10. Lovers xayawaanka gacmaha lafa
Qalabka shoogga ayaa ka dhigaya naqshadeynta. Naqshadeynta waa cute iyo midabka doortay sidoo kale waa qurux badan oo aad jeclaan lahayd.
11. Iskaashatada shaatiinka shimbiraha ah
Markaad hesho shaashaddaada shaashadda ee shaashadda, qofna weligiis kuma arki doono adiga oo aan ku weydiin in aad ku qaadato farshaxanka ku sawiray sawirkaaga.
12. Fiery shaatiinka shimbiraha ah
Xirfadlaha dhamaystiran ee shaashadda shaashadda ee shidaalka ah had iyo goor waxay kuu sheegi doontaa sida aad ula jaanqaadi karto ka dib markaad dheeleyso. Midabka iyo meeleyntu waa mid aan caadi ahayn waxaana laga heli karaa oo keliya saldhig fiican.
13. Tilmaamaha midabtakoorka Superman
Isku day inaadna noqotid superman cusub markaad heshid tashadaan shimbiraha ah ee nuska ah ee xitaa gabadhu xirtaan oo wali waxay u egyihiin qajaar. Maxaad ka fekereysaa naqshada?
14. Dhalasho shaatiinka shimbiraha ah
Sii jirkaada fursad aad ku eegto markaad ka heshid qorshaha tattoo ee qurxinta ee asalka ah.
15. Half Moon oo ah tattoo shaashadda
Waad ku mahadsan tahay inaad dooratid tattoo this! Marka ay timaaddo dhar qaboojiye oo leh macnooyin kala duwan oo dhan meel hal meel ah, u tag si naqshad ah oo dhan.
16. Sawirada gacmeedka shimbiraha ah
17. Super shaatiinka shimbiraha ah
Ka hel tattoo jilicsan oo shaashadda ah sida gabadha oo noqo mid ka mid ah dadka sameeya cinwaanka mar kasta oo aad muujisid.
18. Dabeecadda shaatiinka shimbiraha ah
Wanaagsan naqshadeynta, bacdamaa meeleynta tattoo shaashaddaada badhkiis.
19. Qabow shaatiinka shimbiraha ah
Jidhkaaga hubaal waa ku fiicneyn kan ugu fiican, iyo markaad hesho lacag macquul ah, waxaad u tagtaa qoob-ka-ciyaarka shaashadda.
20. Sawirada gacmeedyada madow iyo caddaanka ah
Waxaad hubaal ka dhigan kartaa in tafaasiirta tattoo-ka ah ay kugu soo dallacayaan xirfadahooda, waqtiga loo baahan yahay in la sameeyo shaqada iyo qalabka loo baahan yahay in la sameeyo.
21. Sawiro gacmeed ah oo quruxsan
22. Sawirada gacmo dhaadheer ah
23. Weyn shaatiinka shimbiraha ah
Dhammaadka maalinta, waxaad jeceli doontaa inaad jeceshahay nooca tattoo ah ee noqotey qofkii ugu fiicnaa. Miyaad dooneysaa inaad aragto kala duwan? Waa inaad tagtaa shaati-gacmeed nus ah
24. Tattoo badhanka wiqiga ee ugu fiican
Ma aragtay nooca tattoo kahor? Mudanayaasha iyo ragga waa kuwa isticmaali kara isticmaalka tattoo si ay u eegaan mid gaar ah oo qabow. Dhamaadka naqshadeynta, waxaad ku faraxsanaan lahayd inaad tagto qaabka tattoo sidan oo kale. Mararka qaarkood, kharashka socdaalkan waa mid raqiis ah mana qaadanayo waqtigaaga. Maxaad ka fekereysaa naqshadeynta aan kugu tusay?
Tags:tattoos sleeve sawirrada ragga
Dhaqdhaqaaqalibto libaaxTattoo infinitygadaal u laabotattoo indhahatattoos qoortatattoo ah octopustattoos cagtatattoos eagletattoos taajkiitattoos gacantatattoosTartoo ubax badanJoomatari Tattoostattoos iskutallaabtaku dhaji tattoossawirada malaa'igtatattoo maroodigamuusikada muusikadatattoos moonsawir gacmeedarrow Tattootaraagada kubbaddatattoos sleevewaxaa la dhajiyay tattoosTattoos Wadnahanaqshadeynta mehndilaabto laabtakoi kalluunkatattoo biyo ahshaatiinka shiidanwaxay jecel yihiin tattooslammaanahatattoos qosol lehsawirrada raggatattoo tilmaanfikradaha tattooTattoo Feathergaraacista gacmahaTilmaamta jaalaha ahcalaamadaha calaamadaha ayaa calaamad u ahtattoos qabaa'ilkatattoo dheemantattoos ubaxshimbir shimbirtattoos qorraxdajimicsiga bisadahahenna tattoosawirada gabdhahatattoos saaxiib saxa ah